नुवाकोटकी डा. स्वेता थापाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गयो- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
नुवाकोटकी डा. स्वेता थापाको विमान दुर्घटनामा ज्यान गयो
फाल्गुन २९, २०७४ कृष्ण थापा
नुवाकोट — सोमबार काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त यूएस बंगला विमानमा विदुनगरपालिका-८ थुम्का २३ वर्षीया डा. स्वेता थापाको निधन भएको छ । उनको शव शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । उनी सोमबार एक महिना छुट्टीमा घर आउँदै गरेको बुवा गजेन्द्र थापाले बताए ।
उनी बंगलादेशको ढाकामा चिकित्सकको अध्ययन सकेर घर फकिंदै थिइन् । उनी एकमात्र सन्तान थिइन् । ‘छोरी एमबीबीस सकेर इन्ट्रर्न गर्न बाँकी थियो,’ बुवा गजेन्द्रले भने,’यस्तो दु:खद् घटना भो ।’
सेन्टजेभियर्स स्कुल अध्ययन गरेकी थापाले प्लस टु जावलाखेलबाट गरेकी थिइन् । उनको शव लिन शिक्षण अस्पताल पुगेका बुवाले आफ्नी छोरीको शव पाउन सकेका छैनन् । ‘पोस्टमार्टम गर्न बढीमा तीन दिन लाग्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘शव क्षतविच्छद हेर्न नसकिने स्थिति छ । कसैको डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने भएकोले समय लाग्छ भनेका छन् ।’
छोरी स्वेता मिहिनेती अध्ययनशील र रुचीअनुसार चिकित्सक अध्ययन गर्न पठाएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । डाक्टर बनेर दिनदुखीहरु र देशको सेवा गर्ने सपना अधुरै रहेको उनको परिवारले जनाएको छ । उनले १३ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेकी थिइन् ।
उनको निधनले छिमेकीहरु र उनका बुवाका साथीहरु समेत स्तब्ध भएका छन् । ‘नसोचेको घटना भयो,’ बुवा गजेन्द्रसँग त्रिभुवनत्रिशूली उमाविमा सँगै पढेका हरिकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘उनको असामयिक निधनले मर्माहत भएँ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १९:०३
फाल्गुन २९, २०७४ विमल खतिवडा
काठमाडौँ — हामी १२ जना ट्राभल एजेन्सीका पर्यटन व्यवसायी र यूएस बंगलाका २ जना प्रतिनिधिहरु बंगलादेशको कोक्स बजारमा हुन गइरहेको कस्टमर सक्सेस समिट भनेर ९ तारिखमा त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थियौं ।
यूएस बंगला एयरलाइन्सले नै आयोजना गरेको कार्यक्रम भएकाले भाग लिन नेपालबाट अतिथिको रुपमा विजनेस पार्टनरको हिसाबले गएका थियौं। कोक्स बजारको कार्यक्रम सकेर सीधै फर्कने कार्यक्रम थियो। तर, हामी एक दिन बढी बस्यौं। ढाकाका ट्राभल एजेन्सीहरुलाई पनि भेट्नु पर्‍यो र पर्यटन प्रवर्द्धनका केही क्रियाकलाप हुन्छन् कि भन्ने आशा थियो। १२ जना ट्राभल एजेन्सीका साथीमध्ये १० जना बस्यौं। जसमा २ जना यूएस बंगलाका साथीहरु थिए। अन्य २ जना साथीहरु अघिल्लो दिननै फर्किए।
सोमबार सेड्युल अनुसारकै फ्लाईट थियो। हामी रमाइलो गर्दै प्लेनमा १२ जना साथीहरु अघिल्लो भागमा बसेका थियौं। हामीसँग नेपाली टोलीमा थुप्रै थियौं। बंगलादेशमा डाक्टरको पढाई सकेर फर्किने विद्यार्थीहरु थुप्रै थिए। राम्रा न्युरो सर्जन बालकृष्ण थापा हामी चढेकै जहाजमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाल घुम्न आउने पर्यटकहरु पनि थिए। सामान्य हिसाबले हामी आइरहेका थियौं। काठमाडौं भ्याली छिरेपछि ल्यान्डिङको क्रममा जहाजले जुन रुट लिनु पर्ने हो। त्यो रुट नलिइ कोटेश्वर आइसकेपछि दाहिनेपट्टिबाट बढी च्यापेपछि जहाजले एयरपोर्ट मिस गर्‍यो। हामीले सोच्यौं टावरसँगकै कम्युनिकेसनमा उसले त्यसो गरेको हो।
तर, त्यस्तो देखिँदैन थियो। एयर ट्राफिकिङको समस्या हो कि भन्ने आशंकाचाहिँ थियो। तर, हामीलाई खासै टेक्निकल कुरा थाहा भएन। त्यो भन्दा अघि जहाज काठमाडौंको उत्तरीबेल्ट बुढानिलकण्ठ, बौद्धको वरिपरिका डाँडाकाँडा घुमाउँदा लो-साइटमा फ्लाईङ गरिरहेको थियो। घर र रुख छुने हिसाबले फ्लाईङ भइरहेको थियो। हामीलाई छोयो छोयो भन्ने लागेको थियो। सबै यात्रुमा त्रास छाइसकेको थियो। अब सुरक्षित अवतरण हुँदैन भन्ने लागिसकेको थियो। हाम्रो जीवन खतरामा परिसक्यो भन्ने बुझिसकेका थियौं। तर, कसो कसो पाईलटले ट्रनिङ गरेर एयरपोर्टलाई अप्रोच गर्दै जहाज आइसकेपछि हामीलाई अब बाँचिन्छ कि भन्ने फिल भयो।
कोटेश्वरबाट दाहिने साईड च्यापेर पाइटलले ल्यान्ड गर्ने क्रममै खतरा छ भन्ने लागिसकेको थियो। टावरले रङ छ भन्ने कुरा त पहिल्यै भन्छ। ल्यान्ड गर्ने बेलामा भन्दैन भन्ने थाहा थियो। रङ ल्यान्डले पाइलटको मिस्टेक भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो टेक्निकल कुरा हो। मैले ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने कुरा भएन। फर्काएर ल्याउँदा पनि सइ ठाउँमा ल्यान्ड गर्न सकेन। ल्यान्ड गर्नुभन्दा २ मिनेट अघिसम्म एकदमै आशावादी थियौं, बाँचियो भनेर। जब कालो पत्रेमा नठोक्किइ रफमा ठोक्कियो।
जहाज भुइँमा बजारियो। त्यतिमात्र याद छ। बजारिसकेपछि मेरो अर्को स्मरण भनेको कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर चौरमा स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ। म आफैं घस्रिएर दुर्घटनाबाट बाहिर निस्कने प्रयास गर्दै थिए। जहाजबाट पेट्रोलको फोहोरा निस्किइरहेको थियो। जहाज पड्किने र आगलागी हुने खतरा थियो। धुँवा आइरहेको थियो। पछाडि फर्किएर हेर्न सकिनँ। जे हुनुपर्ने। २ मिनेटमा भयो। बाँच्नका लागि भाग्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ। खुट्टामा चोट थियो। भाग्नै सकेको थिइनँ। घस्रिँदा घस्रिँदै उद्धारमा खटिएको नेपाली सेनालाई देखेँ।
उद्धार गरेर केएमसीमा ल्याइयो। त्यहाँ लथालिंग अवस्था थियो। आफन्तले केएमसीमा गाह्रो हुन्छ भनेर नेपाल मेडिसिटी अस्पताल नख्खु लिएर आए। उपचारको क्रममा छु। तर, मलाई दु:ख लागेको छ। पर्यटन व्यवसायी, डाक्टर भाइबैनी, नेपाल आउन लागेका थुप्रै पर्यटक गुमाएका छौं। यसले सबैलाई दु:खी बनाएको छ। मेरो दाहिने खुट्टाको घुँडाभन्दा तल फ्याँक्चर भएको कुरा चिकित्सकले भनेका छन्। दाहिने भागको २ वटा करङमा समस्या भएको कुरा आएको छ। आँखामा थोरै इन्फेक्सन भएको छ। सामान्य चोट शरीरका विभिन्न अंगमा लागेका छन्। अवस्था सामान्य छ। उपचार अझै हप्ता १० दिन लाग्ने कुरा आएको छ। बाँच्छु भन्ने लागेको थिएन, तर धेरै साथी गुमाएर नयाँ जीवन पाए। साथीहरु गुमाउँदा दु:ख लागेको छ।
(नेपाल मेडिसिटी अस्पताल नख्खुमा उपचार गराइरहेका पर्यटन व्यवसायी पाण्डेसँगकाे कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ १८:४७